REDLINE MEDIA (Page 3)
အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းကိုဦးစားပေးပြီး အနုပညာရေချိန်မြင့်သလို တန်ဖိုးကလည်းမြင့်မားစွာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Keanu Reeves ရဲ့ ARCH မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ
အိုစီတာဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? အိုစီတာဆိုရင် ဘယ်လိုကားတွေစီးမလဲ? အိုစီတာဆိုရင် FA တစ်ယောက်ဖြစ်မှာလား? ဘယ်လိုပဲပြောပြော အိုစီတာဆိုတာ အောင်မြင်ကျော်ကြားလျက်ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။...
Ford vs Ferrari ဇာတ်ကားမှာက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကားမောင်းပြိုင်ဆိုင်မှုတွေသာမက နိုင်ငံရေးတွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းတွေပါ သဘာဝကျကျထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတာပါ။ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း Christian Bale နဲ့ Matt Damon ဆိုတော့......
ဘယ်လိုပုံကြီးလဲ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံရုပ်ရှင်ကြော်ငြာလား လို့လူပြောများနေတဲ့ Tesla ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် Cybertruck နဲ့ဆိုရင်......
ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီဆိုရင် မိုက်ကယ်ရှူးမေကာဟာ ဂန္ထဝင်ပါပဲ ဒီလိုကျော်ကြားလှတဲ့ ကားမောင်းချန်ပီယံကြီးဆီမှာ လူသိနည်းတဲ့ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ ရှိနေမှာတဲ့လဲ?...
သိပ်ကိုပေါ့ပါးတယ်။ ပြီးရင်မြန်နှုန်းမြင့်တယ်။ Bugatti ကို SUV အမျိုးအစားတွေနဲ့ Limousine လိုမျိုး အရွယ်လွန်ဇိမ်ခံကားမျိုးတွေအဖြစ် တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ နေ့စဉ်သုံးမြန်နှုန်းမြင့်ကားမျိုးတော့ ထွက်လာဖို့ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ Bugatti CEO......
နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်တွေကြောင့် နာမည်ကျော်ပြီးသား 'ကား' တွေဟာ ထပ်ဆင့်နာမည်ကျော် လူကြိုက်များလာကြတယ်။ ရုပ်ရှင်လောကမှာ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ အမေရိကရုပ်ရှင်တွေမှာ အများဆုံးပါဝင်နိုင်တာ ဘယ်လို 'ကား' အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်နိုင်မလဲ။...